Home » Copy/Paste » ဘုရား မဟော၊ မပြောတာကို မယူစေလို
အဗျာကတ၀တ္ထု ဆိုသည်မှာ တကယ်အရှိ၊ အဟုတ် အနေဖြင့် ပြော၊ ပြု၊ ပြ လို့မရသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားပင် ဖြေကြားတော်မမူခြင်းကို ရှိသည်၊ ဖြစ်သည်ဟု အတည်ပေါက် ဟော၊ ပြော၊ ယူနေခြင်းမှာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အစစ်ဖြစ်၏။
ရွာထဲမှာတော့ တယောက် တပေါက်နဲ့ တော်တော် ဆူ နေပါတယ် ဘုရား..
ရှေ့လျှောက် တရား စာပေများ များများ ဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ် ဘုရား။
သူကြီးက ပညာပြချင်နေပုံရတယ်…. ။ အဲ့ဒီ ကြိမ်လုံး နှစ်ပိုင်းချိုးထားဦးမှပဲ
ဘယ်သူ မပြု မိမိမှု…
ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ ဟူသည် သမုတိသစ္စာအားဖြင့် သီလအကျိုးငှာလည်းကောင်း လူမှုဆက်ဆံရေးအလို့ငှာ လည်းကောင်း သုံးရုံသက်သက်၊ အသုံးချရမည့်တရာ်းသာ ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရပေမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ များကို အတည်ယူကာ – အဟုတ်ထင်လျှက် သတ္တ၀ါအစကို လည်းကောင်း ၊ ငြင်းခုန်ခြင်း၊ ငြိတွယ်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုရမည်မဟုတ်ပေ။
ပညတ်တရားများ၊ သမုတိသစ္စာ များကို အဟုတ်ထင်ကာ ပယ်လျှင်လည်း မှားပါသည်။ အဟုတ်ထင်ကာ တွယ်လျှင်လည်းမှားပါသည်။
သေချာနားလည်စေရန် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ ဒိဌိဖြုတ် တရားများ- ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ အယူနှင့် ပတ်သက်ပြီးဟောကြားသော တရားတော်များ နားဆင်ရန် အကြုံပြုပါသည် ။ http://www.dhammaransi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2009-08-24-11-38-45&catid=50:mp3&Itemid=83
ကျေးဇူးပဲ true answer ရေ၊
သစ္စာတရားကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ဂိုဏ်စွဲ၊ ၀ါဒစွဲ၊ ဆရာစွဲနဲ့ နဂိုအယူအဆအစွဲတွေဖယ်ပြီး ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့ သဘောအမှန်ကို သိအောင်လေ့လာပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သဂျီးရေ ဘာမှ မပူနဲ့ကျုပ် မနေ့ ကပဲ ကြက်ဥကြိမ် အစည်းလိုက် ၀ယ်ပြီး ရေစိမ်ထားတယ်။
သင်္ကြန်ရက် အတွင်းမှာ အယူတိမ်းတွေကို ရိုက်ဖို့ ။
“…..သေပြီးနောက် ဖြစ်၊ မဖြစ် အယူများလက်ခံထားပြီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာများ ပြုလုပ်နေကြပါက ဘုရား၏ အလိုကျ ကုသိုလ်ပြုခြင်းများ မဟုတ်တော့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပင် မဟုတ်ဟုပြောရပေတော့မည်။……”
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာများ ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါ သေပြီးနောက်ကို အာရုံရောက်နေပါက အမျှော်ကုသိုလ်၊ အကြောက်ကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်နေမှာမို့ လောကအတွက် အသုံးမကျ အချီးအနှီးသဘောတွေပဲဖြစ်နေမှာပါ။
naing thu says:
ဘုရားဟောတဲ့ ဒိဌိဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲဘုရား…
-ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာများ ပြုလုပ်နေကြပါက ဘုရား၏ အလိုကျ ကုသိုလ်ပြုခြင်းများ မဟုတ်တော့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပင် မဟုတ်ဟုပြောရပေတော့မည်။- ဟူသော အယူဝါဒသည် ဗုဓ္ဒဘာသာအတွက် အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းသော လွဲမှားသော အယူအဆတခုသာဖြစ်ပါသည်၊ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတ်တန်များစွာဟောကြားထားသည်မှာအထင်အရှားဖြစ်ပါသည်၊ သဒ္ဒါတရားပြည့်ဝစွာဖြင့်ဒါနပြုလျှင် ချမ်းသာမည်၊ လောကီ သံသရာတွင်ချမ်း သာစွာလည်ပတ်လိုသူတို့သည် ဒါနသီလကိုအားကိုးရမည် ဖြစ်ပြီး သံသရာမှလွန်မြောက်ပြီး နိဗ္ဗာန် သို့ရာက်လိုလျှင် ၀ိပသာနာဘာဝနာ သည် တခုတည်းသောလမ်း ဟုဟောကြားခဲ့ပါသည်။ တရားတော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသနှင့် ဆွေးနွေးကြည့်ရန်အကြံပြုပါသည်။
စာအုပ်ကြီးအတိုင်း တရားသေ ပြောဆို ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပဲ ကာလာမသုတ်အလိုကျ ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသနဲ့ online မှ ဆွေနွေးလိုပါတယ်။ စီစဉ်ပေးနိုင်ပါက ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။
ဟေ့ …ဟေ့ …. ဒါနကနေ မစနဲ့ လေကွယ်….။
သေပြီးနောက် ဖြစ် မဖြစ် ဆိုတာကနေစမှ မျှတမှာပေါ့…။
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဘုရာ့….။
မြန်မာ အသံထွက်မှားရင် ဒါနဲ့ ပြင်ဖတ်နော်။
ရွာထဲ.. ဘုန်းတော်ကြီး ဘယ်နှပါးရှိသလည်း မသိ…
မန္တလေးဂေဇက်မှာ စာရေးဖူးတဲ့… ခရစ်ယန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်း ပင့်ဖိတ်ဦးမှပါ…
သံသရာ ဟူသောစကားလုံး ကိုသုံးထားပါသည်။လူဝင်စားများအကြောင်းရော ကြားဘူးပါသလား။
“…….လောကီ သံသရာတွင်ချမ်း သာစွာလည်ပတ်လိုသူတို့သည် ဒါနသီလကိုအားကိုးရမည် ဖြစ်ပြီး သံသရာမှလွန်မြောက်ပြီး နိဗ္ဗာန် သို့ရာက်လိုလျှင် ၀ိပသာနာဘာဝနာ သည် တခုတည်းသောလမ်း …”
သံသရာ ဆိုတာကိုတွေ့ ပါတယ်။ လောကီ သံသရာမှာ ချမ်းသာစွာ ( ဆင်းရဲစွာ မဟုတ်ဘူးနော်)
လည်ပတ်စွာ (လည်ပတ်စွာ ဆိုတာက Recycling) …
လူဝင်စားများ အကြောင်း ကြားဖူးပါတယ်။ အလွန် သနားစရာ သတ္တ၀ါများပါ။
လူပြန်ဖြစ်လာလို့လူဝင်စားလို့ပြောလို့ ရပေမဲ့ လူမဖြစ်လာခဲ့ရင်
“မကျွတ်ဘူး” လို့ပြောလို့ ရတဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
လူဝင်စားတာ မစားတာ။ သေပြီးနောင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတွေ ဘာမှလျှောက်ပြောမနေကြပါနဲ့ ဒါတွေက လူကိုဘာဖြစ်သွားစေမှာမို့လို့လဲ
မဂ္ဂင် ၈ပါး မြတ်တရား ကိုကြားဘူးပါသလား။
မဂ္ဂင် ၈ပါး မြတ်တရားကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ပရမတ္တသစ္စာအမြင် လေ့လာမှုနဲ့ အရိယသစ္စာအမြင် လေ့လာမှုကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့လိုပါတယ်။
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်.. ၀ိပသနာကျင့်နည်းတွေကလည်း.. တိဘက်ရဟန်းတပါးက.. သီဟိုမကြွခင် မြန်မာပြည်မှာ အရင်ပို့ ချသင်ပြပေးသွားတာတွေပါပဲ..။
အတ္တ နဲ့တပ်မက်မှုကို မစွန့် ခွာနိုင် လို့လူဝင်စား ပြန်ဖြစ်တာဟာ ” မကျွတ်တာပါ”…။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ၊ ချမ်းသာသုခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှသော ကောင်းမှုကုသိုလ် အစုစုကို ရွာသူရွာသားအပေါင်းကို အမျှပေးဝေပါ၏၊ -အမျှ ၊အမျှ၊ အမျှ -ယူတော်မူကြပါကုန်လေ့ာ၊ ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သမျှသော ကောင်းမှုကုသိုလ် အစုစုကို ကျွန်ုပ်က သာဓုခေါ်ပါ၏၊ – သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။
နောက်ဆုံး ကျည်ဆံနဲ့ ပစ်သွားပါလား ဆရာသမားရဲ့ ။
ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာနဲ့ပတ်သပ်တဲ့ Post တစ်ခု ရှိတယ်နော်။
ုkoo @ မိုးပြာဂိုဏ်းအကြောင်းသိရင် ပြောပါအုံး။ ဟိုတလောကတော့ အန်တီဆူး ကွန်မန့်တခုမှာ ထည့်ရေးဖူးတယ်။ ကိုယ်တိုင်မရေးချင်လည်း နာမည်အသစ်ဖွင့် ရေးပေးပါလား။ ရွာထဲက သိသူများရှိရင်လည်း ပို့စ်တပုဒ်လောက် တင်ပေးပါလို့……
ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္မဒေသနာ (အရိယသစ္စာ)သည်
အစိပ်တွေပေါင်းစုထားတဲ့ အစုပညတ်တွေကို သမုတိသစ္စာဟု နားလည်ပေးပါ။
မသိလို့မေးပါရစေ….ဆရာတော်တွေ များလားဟင် ရွာထဲမှာ….
သျှင်ကြီး နိဂိမိ တော့ရှိတယ်လို့ ကြားတယ်။ ဒီရွာထဲမှာ။
အရှင်ဘုရား(သို့) မိတ်ဆွေကြီးအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ မိမိပို့စ်မှ အယူအဆများမှာ မိုးပြာဂိုဏ်းအယူအဆများကို တင်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ အရှင်ဘုရားရဲ့ရှေ့ပိုစ်များတွင်လည်း ပိုမို သိရှိရန် မိုးပြာဂိုဏ်းမှ လင့်များကို လေ့လာဖတ်ရှုကြရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
ဘုရားဟောခဲ့တာတွေကို သမုတိသစ္စာနဲ့က ဘယ်လိုယူရတယ်၊ ပရမတ္တသစ္စာနဲ့က ဘယ်လိုနားလည်ရတယ်၊ အဘိဓမ္မာနဲ့က ဘယ်လိုဆိုပြီး
အရှင်ဘုရားတို့ အယူက ဘုရားလက်ထက်က တထ္ထိအယူထဲက ကာယဒဏ် ဝစီဒဏ် မနောဒဏ် ဆိုတာနဲ့ သွားတူနေ၊ မနေကို ရှင်းပြဖို့ မေတ္တာရပ်တာ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒီထဲက တယောက်မှ ထွက်မလာဘူး။
လူသေပြီးရင် ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူး၊ နှစ်ခုလုံးကို ဘုရားက အကျိုးစီးပွားနဲ့ မစပ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြံဆ မှုတွေမို့ မဟောတာလို့ အဗျာကတတရားတွေမှာ အခိုင်အမာ အသေအချာ ဟောထားပါရက်နဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ ဘုရားပဲဟောခဲ့သလိုနဲ့ သမုတိသစ္စာနဲ့က ဘယ်လိုယူရတယ်၊ ပရမတ္တသစ္စာနဲ့က ဘယ်လိုနားလည်ရတယ်ဆိုပြီး နားလှည့် ပါးလှည့် ပြောနေကြတာဟာ ဘုရားထက်တောင် သူတို့က ပိုတတ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား မယူစေချင်တာ၊ မတွေးစေချင်တာတွေနဲ့ တွေးနေ၊ ဟောနေရင်တော့ အဲဒါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။
ကျနော်ကတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောတာကိုယူပါတယ်၊လေးစားလိုက်နာပါတယ်၊ ashinariya ဟောတာတွေကိုသာမယူတာပါ။
သေပြီးနောက် ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို မယူဘူးဆိုတာ အဗျာကတ၀တ္ထုမှာ ဘုရားသေသေချာချာ ဟောထားတာလေ။ ဒီအယူတွေဟာ အကျိုးစီးပွား မဖြစ်စေလို့ မယူသင့်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူပြောပြော သဘာဝကျရင် လက်ခံ ရမှာပေါ့။ nature နဲ့ကတော့ ခက်ပါတယ်လေ။ တရားကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ရတယ်ကွဲ့။
ခြင်္သေ့ဘုရင်လည်း သိရင်လုပ်ပါအုံး။ အရိယာသစ္စာသိနေမှတော့ ဒါလေးတော့ ရှင်းပြနိုင်သင့်ပါတယ်။ နို့မို့ရင်တော့ အရိယာဈေးကျအောင်လုပ်နေတာလို့ ယူဆမယ်ဗျို့။
စိတ်မပူပါနဲ့ ကိုယ့်လူရာ၊ အရိယာဈေးက ကျလည်းမကျ၊ တက်လည်း မတက်ပါဘူး။ ပုံမှန်ပါပဲ။
ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီကိုယ့်လူ။ မနေ့တနေ့ကမှ သင်္ကန်းစီးပြီး ရေစက်ချတရား လာဟောဖို့မကြိုးစားနဲ့၊ ရွာထဲမှာ ဘဒ္ဒန္တတွေ အများကြီး….
ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ကွန်မန်းကို သဘောကျတယ်ဗျိုး။ အခုဟာက မေးလိုက်ရင် ဟိုဆိုက်ညွှန်း၊ ဟိုဟာဖတ်ပါဦး၊ ဒီဟာ ဖတ်ပါဦးနဲ့။ တခြားဘာသာခြားတွေ ဘာသာရေးကျုံးသွင်း သလိုမျိုးလုပ်နေတယ်။ eros တို့ကတော့ ဒါမျိုးနဲ့ သိမ်းသွင်းတာရိုးနေပြီ။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ခံရဘူးလို့။
They don’t respond because of they don’t have answer.
ဒဂုံမြို့သစ်မှာ ဒကာ ဒကာမတွေ လှူထားတဲ့ဝတ္ထုငွေတွေနဲ့ မြေကွက်တွေဝယ်ပြီး လုပ်စားနေတဲ့ ဘုန်းကြီးရှိတယ်။ ပွဲစားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး စီးပွားရေးလုပ်နေတာ။ အကြောင်းသိတဲ့ ဦးဏှောက်ရှိတဲ့သူတွေက လုံးဝမကြည်ညိုဘူး။ တစ်ခါ ဘိုကလေးသွားတုန်းက ညဘက်ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးသည်ကို သားပြော၊မယားပြော ပြောသွားတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ ကြုံလိုက်ရတယ်။ ဈေးသည်ကို အဲလိုပြောတာ တို့တွေရှေ့မှာမို့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့။ ဈေးသည်ခမျာ လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ အံ့သြတာရယ်၊ ရှက်လွန်းအားကြီးသွားတာရယ်။
မိမိတို့ဝါဒကို အများလက်ခံအောင် ဗုဒ္ဓစာပေများကို ထုတ်ယူကိုးကားလျှက် မိမိလိုသလို ဘာသာပြန်ပြီး ဗုဒ္ဓသာသာအမည်ဖြင့် သပ်လျှို လိမ်လည် လှည့်ဖြားခြင်းကို ရပ်တန့်သင့်ပေပြီ။
true answer ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ဟိုမှာ သုတ္တန်နဲ့တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်ဆို ကိုယ်ပိုင်နာမည်သုံးရမယ်လို့ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ သူတင်ပြပုံကရှင်းနေတာပါပဲ။ ဒီထဲမှာဒီလိုပါနေတယ် ကြည့်ကြပါသဘောပေါ့။ သူ့အယူအဆဆိုရင်တော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ပါလို့ပြောမှာပေ့ါ ။ အခုခတ်ကြီးမှာ မှန်ကန်တဲ့အယူအစဆိုရင်လူတွေလက်ခံကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာကိုတော့ တင်ပြသူက ဖော်ပြချင်ပုံပါ။ ဆရာကိုဘယ်ပြစ်မှားဖို့တော်မလဲ။ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဆိုရင်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့တော် ပြောမှာပါ။
ordinary man ရေ
(ခင်ဗျားတို့ လေးယောက် ထဲက တစ်ယောက်ပြောတာပဲ။ koyo realman၊ ashinariya, ordinaryman တစ်ယောက်ယောက်ပဲ၊ ဒါမှမဟုတ် shadow လားတော့မသိး)
နောက်တစ်ချက်။ ခင်ဗျားတို့ ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ ကို ရှိတယ် မရှိဘူး မယူဘူး ဆိုရင် –
http://myanmargazette.net/64548/creative-writing ဒီမှာ ရှင်းလင်းပြီးသားလေဗျာ မဖတ်ရသေးဘူးလား။
ဟိုးရှေးယခင်တုန်းက ကဘာကြီးကို ပြားတယ်လို့လက်ခံလာခဲ့ကြတာ ဒါကိုဘဲ အမှန်လို့လူတွေလက်ခံခဲ့ကြရတာပါ။ အဲဒီလူတွေရဲ့ကြားထဲမှာ လုံးတယ်လို့ပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတော့ အဲဒီလူကို သတ်တောင်ပစ်လိုက်ကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးတယ်လို့သိတဲ့အသိဟာမှန်ကန်ပြီးလူးသားအတွက် အသုံးဝင်တဲ့အတွက် ဒီအမြင်ကို ယောင်တောင်တောင်လို့ပြောလည်းခံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က လူသားအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘာသာကပြော လက်ခံရမှာပဲဗျ။ ကိုယ်ယူတဲ့အယူအဆက ကိုယ်အမှန်တကယ်သိပြိးကိုယ့်အတွက်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့…
Christian believe the world is flat and they kill the man who told the world is round.
“ဘုရား မဟော၊ မပြောတာကို မယူစေလို”
နမော တဿ ဂါထာဟာ ဘုရားဟောမဟုတ်ပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားကို နတ်မင်းကြီး လေးပါးက ပူဇော်ရှိခိုးတဲ့ဂါထာပါ။ ဂါထာထဲမှာက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ရည်မှန်းပြီး ပူဇော်တာပါ။ သန္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာဟာလည်း ပွင့်တော်မူပြီးသော မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်များကို ရှိခိုးပူဇော်တဲ့ ဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။